राजमोका सोझा नेता चित्रबहादुर केसीलाई ५ वर्ष कैद सजायँ होला ? – ebaglung.com
२०७६ आश्विन २, बिहीबार ०८:२९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७६ असोज २ । राजधानीबाट बिहिबार प्रकाशित भएको शुक्रबार साप्ताहिकले “सोझा नेताको गम्भीर अपराध” शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले जेठा छोरा सचित्र केसीतर्फका दुई छोरा सचित र सचिन केसीलाई कान्छा छोरा विष्णु केसीको छोरा बनाइएको दाबी गरेको छ । समाचारमा ०६७ माघ ५ गते प्रशासनलाई पत्तै नदिई बाबु–आमा परिवर्तन गराएको उल्लेख छ । शुक्रबारले लेखेको छ, केसी परिवारले कानूनलाई सीधै ढाटेर आमा–बाबु नै परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।’
शुक्रबार साप्ताहिकले केसीले गैरकानूनी रुपमा दुई बालकको बाबुआमा परिवर्तनको कारण जापानमोह भएको पनि उल्लेख गरेको छ । चित्रबहादुरका कान्छा छोरा विष्णु जापानमा छन् । चित्रबहादुरले दुई नाति जापान पठाउने मोहकै कारण उनीहरुका आमा–बाबु नै परिवर्तन गरिदिएको शुक्रबारले लेखेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘आफू सभासद् भएका बेला गाउँविकास समितिलाई प्रभावमा पारेर उनी झूटो सिफारिस बनाउन आफैं खटिएका थिए । यो थाहा पाएर जनमोर्चाका कार्यकर्ताले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए ।’
समाचारमा जनमोर्चाकी प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले यो ठूलो इस्यु नभएको बताएको उल्लेख छ । जेठा छोराको घरपरिवार बिग्रिएपछि केसीले यस्तो कदम चालेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेलले हाम्रो नेपाली समाजमा आफ्नो दाइको छोरालाई आफ्नै मान्ने चलन छ । यसले राष्ट्रलाई कुनै घाटा पुर्याउँदैन । बाबुआमाले दाबी गरे भने कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । बाबुआमाले कुरा उठाएका छैनन्’ भनेको शुक्रबारले प्रकाशित गरेको छ ।
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको दफा ११५ आकर्षित हुने र त्यसमा ५ वर्षको कैद रहेको रिपोर्टमा लेखिएको शुक्रबार साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशित यस खबरले बागलुङमा के अब सोझा नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसीलाई ५ वर्ष जेल सँजाय होला त ? भन्ने कौतुहलता बढाएको छ ।